Semalt: Ahoana ny fomba hamantarana sy hanaisotra ny SEO Japoney amin'ny tranonkala
Toa ny mainty hoditra SEO dia tsy natory nandritra ny iray minitra tamin'ny 2017. Misy teknika vaovao ampiasaina hanesorana ny valin'ny fikarohan'i Google ary mamorona ny lahatsoratra Japoney autogenerated amin'ny valin'ny fikarohana. Amin'ny fampiasana ity fomba amam-pitsipika ity, ny teny Japoney dia noforonina tao amin'ny lohateny sy ny famaritana ny tranonkala nanafika. Maro ireo mpampiasa no nihaona tamin'ity olana ity ary niresaka momba azy io ho "Japoney SEO Spam", "Japanese Keyword Hack", na ny "Japoney Search Spam" - 1 urlaubstag bei umzug nach.
Hita fa ireo tranonkala spamming ireo dia misy ifandraisany amin'ny fivarotana mpivarotra sandoka. Ny hacker dia matetika manampy ny tenany ho tompon'ny tranonkala ao amin'ny Search Console ary manipuler ny fijerin'ny tranokala toy ny sitemaps. Noho izany, raha ampahafantarina anao fa misy olona nanamarina ny tranokalanao ao amin'ny Search Console ary tsy fantatrao hoe iza izy io, misy ny tena mety ho fantatra ny toerana misy anao.
Andrew Dyhan, mpitantana ny Success Successor avy amin'ny Semalt , dia manondro ny fomba hanakanana spam japoney.
Mamantatra ny japoney SEO Japoney amin'ny tranonkalanao
Raha miahiahy ianao fa voamarin'ity spam ity ny tranonkalanao dia mandehana ao amin'ny Search Console ary jereo ny Issues Securities. Ho fantatrao raha hitan'i Google ny pejy hacked.
Azonao atao koa ny manaisotra pejy voasambotra amin'ny fidirana ao amin'ny "tranokala: [ny faka ao amin'ny faka ao amin'ny tranokalanao]" ao amin'ny sahan-drakitry ny fikarohana Google. Google dia mamerina lisitr'ireo pejy voatanisa ary ny pejy hacked dia tokony ato amin'ity lisitra ity. Ataovy azo antoka fa hamakivaky pejy maromaro amin'ireo valim-pikarohana ianao mitady ny URL tsy mahazatra. Te-hampiasa fomba hafa
Mba hijerena ny fitrandrahana dia mandehana ao amin'ny Fetch ho fitaovana Google ao amin'ny Search Console ary midira ao amin'ny URL misy anao. Ity fitaovana ity dia manazava ny votoaty miafina ho anao.
Ahoana no hamahana ny Japoney SEO Spam
Alohan'ny hidiranao any amin'ny fikarakarana tranonkala iray izay misy fiantraikan'ny Japoney Search Spam, alohan'ny hametrahana izany. Alefaso ny rakitra rehetra ao amin'ny servero ary esorinao any amin'ny toerana misy ny server. Tohano ny tahirin-kevitra raha toa ianao mampiasa mampiasa ny Content Management System (CNS).
Aorian'ny safidinao ireo antontan-taratasy manan-danja an-tserasera, ampiasao ireto dingana manaraka ireto hanesorana ny tranonkala SEO Japoney amin'ny tranonkalanao:
Esory ireo kaonty vaovao izay nampidirina ny Console Search ary avelao fotsiny ireo mpampiasa voamarina izay miseho ao amin'ny pejy fanamarinana Search Console.
Karohy ny tahiry .htaccess ary manolo izany amin'ny dikan-teny vaovao tanteraka. Imbetsaka, mampiasa fitsipika haccess ny hackers mba hamoronana pejy fanamarinam-pikarohana sy tsipika maromaro ary mamerina ireo mpampiasa.
Mamantatra sy manala ireo sora-tanana sy rakitra ratsy.
Diniho ankehitriny raha madio ny tranonkalanao.
Tena zava-dehibe ny fahafantarana ny fomba hanamboarana vulnerabilities, saingy ny fahatakarana ny fisorohana azy dia mbola zava-dehibe kokoa. Mba hiarovana ny tranokalanao amin'ny SEO Spam Japoney sy ireo karazana spam hafa, tsindrio ny tranokalanao matetika, manova matetika ny tenimiafinao, ampiasao ny fahazoan-dàlana Two-Factor, ary tehirizo ny CMS, ny plugins, ny modules ary ny extension ireo. Mamporisika anao hanao sonia amin'ny serivisy fiarovana izay hanara-maso ny tranonkalanao sy hitazomana azy.